လယ်သမားများအတွက် ဆင်းရဲတွင်း လွတ်လမ်းပေလော
Post byနယူးဒေလီ on Wednesday, December 19,2018
ဓာတ်ပုံ- News Click
နယူးဒေလီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉
“ စိုက်ပျိုးရေးမှာသာ တစ်ခုခု မှားယွင်းသွားရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ဘူး ’’
အမ်. အက်စ်. ဆွာမီနသန်
အိန္ဒိယနိုင်ငံက လယ်သမားတွေရဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေက အထူးတလဲကို ပြောနေစရာ မလိုလောက်အောင် ထင် သာမြင်သာ ရှိနေပြီးသားပါ။ မကြာသေးခင်က လယ်သမားတွေ ကြုံခဲ့ရတာတွေက သက်သေပါပဲ။ တယ်လန် ဂါနာပြည်နယ် အစိုးရက လုပ်နေတဲ့ လယ်တစ်ဧကကို ရူပီး ၄,၀၀၀ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့တဲ့ Rythu Bandhu Scheme (RBS) ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ဟာ အမှောင်ထုထဲက အလင်းစလေး တစ်စပါ။ ဒီအစီအစဉ်မှာ နိုင် ငံရေးအကွက်တွေ ပါတယ်ဆိုပြီး ငြင်းခုန်နေတာတွေကို ဖယ်လိုရင် ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အကျိုးကတော့ ဆွေးနွေး သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါပဲ။
လူဦးရေ ၃၆ သန်းရှိတဲ့ တယ်လန်ဂါနာပြည်နယ်မှာ လူဦးရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်က လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ အဲဒီလယ်သမားတွေထဲကမှာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ဆင်းရဲတဲ့ လယ်သမားတွေပါ။
သူတို့အားလုံးပေါင်း ပိုဆိုင်တဲ့ လယ်ယာမြေဟာ ပြည်နယ်အတွင်းက လယ်ယာမြေရဲ့ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း (သုံးပုံ တစ်ပုံ)ပဲ ရှိပါတယ်။ အသေးစားလယ်သမားတွေ ပိုင်ဆိုင်တာကတော့ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း(ဆယ်ပုံတစ်ပုံကျော်) ပဲရှိ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပြည်နယ်က ခရိုင်အများစုက မိုးခေါင်ကြတယ်။ လယ်ယာမြေတွေရဲ့ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဟာ မိုးကောင်းတောတွေပါ။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အားလုံးဟာ မိုးအပေါ် မှီခိုနေကြရတယ်။ စိုက်ခင်း အများစုကို လက်ယက်တွင်းတွေ၊ လက်တူးရေတွင်းထဲက ရေတွေနဲ့ ရေပေးဝေတယ်။ အဲဒီရေတွင်းတွေဟာလည်း ခမ်းတာ တို့၊ ရေနည်းလွန်းသွာတာတို့ ဖြစ်တတ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာတွေ၊ အကြွေးနွံနစ်တာတွေ၊ မလုံလောက်တဲ့ ငွေချေးပေးမှုတွေကြောင့် လယ်သ မား အမြောက်အမြားဟာ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်လာတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှုမရတာ၊ မိုးမမှန်တာ၊ စိုက်ပျိုးစရိတ် ပိုများလာတာ၊ အကြွေးနွံနစ်တာတွေဟာ ပြည်နယ်အတွင်းက လယ်လုပ်လက်စား တောင်သူတွေ၊ ငွေကြေးမပြေလည်တဲ့ တောင်သူတွေကို ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့်ဆိုသလို ပိုအခက်ကြုံစေတယ်။ ဒါဟာ အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံးက လယ်သမားတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေပဲ။
ငွေကြေး အရင်းအနှီးအဖြစ် လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုပြနိုင်တဲ့ လယ်သမားတွေကို စိုက်ပျိုးရာသီအစမှာ တစ် ဧက ရူပီး ၄,၀၀၀ (ကျပ် ကိုးသောင်းနီးပါး)ကို နှစ်နှစ် တစ်ကြိမ် အစိုးရက ထောက်ပံ့တယ်။ လယ်သမား ခြောက် သန်းနီးပါး ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အကျိုးကို ခံစားခွင့်ရမယ်လို့ မှန်းထားကြတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို လူတော်တော်များများ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြတယ်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံရေးတွေ ပါတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်တာမျိုးတော့ ရှိတယ်။ အစိုးရဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ရူပီး ၁ဒသမ၂ ဘီလီယံ ချထားပေး ထားတယ်။ လိမ်လည်ထုတ်ယူတာတွေ ရှိမှာစိုးတဲ့အတွက် အစိုးရက လယ်သမားတွေကို ချက်လက်မှတ်တွေပဲ ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ပဲ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်နေတဲ့ မျိုးစေ့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းက South-South Cooperationနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ တယ်လန်ဂါနာ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ် ရိက္ခာအဖွဲ့တို့ မကြာသေးခင်က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသေးတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှာ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အရေးပါပုံကို ပြနေတာပါ
အခုလုပ်နေတဲ့ အဲဒီတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းဟာ အလှည့်အပြောင်းများတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက် ကြောင့် လယ်သမားတွေ ဒုက္ခမရောက်အောင် အကူအညီပေးတဲ့ ဝင်ငွေအစီအမံပါ။ တခြားလုပ်နေတဲ့ တိုက် ရိုက်ထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်တွေနဲ့ မတူတာက ဒီစီမံကိန်းက အကောင်အထည်ဖော်ရ လွယ်ကူတယ်။
ကမ္ဘာမှာတော့ တရုတ်ကလည်း ဒီစီမံကိန်းလို အလားတူစီမံကိန်းတွေကို ဘက်စုံအကူအညီပေးရေး စီမံကိန်း ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ လုပ်နေတာရှိတယ်။
အဲဒီစီမံကိန်းက လယ်သမားတွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကို ဧကအလိုက် ပေးတယ်။ စိုက် ပျိုးရာမှာ ထည့်သွင်းရတဲ့ သွင်းအားစုအခြေပြု အရံအထောက်အပံ့ စီမံကိန်းတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်ပြီး ဟက်တာအလိုက် ငွေအလုံးအခဲလိုက် ပေးတာဟာ တရုတ်စိုးရက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုက်ရိုက်အရင်းအနှီး အကူ အညီပေးတဲ့ စီမံကိန်းဘက် ပြောင်းလာနေတာကို ပြနေပါတယ်။ ပိုပြီး အရေးကြီးတာက အိန္ဒိယမှာ အကောင် အထည်ဖော်နေတဲ့ RBS စီမံကိန်းက အကောင်အထည်ဖော်ရ လွယ်ကူတယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိတယ်။ ငွေရ လွယ်တယ်။ သီးနှံအလိုက် ခွဲခြားတာမရှိဘူး။ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက် စနစ်ကို မပျက်စေဘူး။ ကြားခံတွေ သိပ် မရှိဘူး။
RBS ရဲ့ အကျိုး
ငွေကြေးရရှိမှု အခြေအနေအရကြည့်ရင် ဒီစီမံကိန်းဟာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးအတွက် လက်သမားတွေ လက် ထဲကို ငွေသားထည့်ပေးတယ်။ ဒါဟာ ဆင်းရဲတဲ့ လယ်သမားတွေကို မိမိရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု တိုးလာနိုင် အောင် အကူအညီပေးတယ်။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ ပါဝင်နိုင်အောင် အကူအညီပေးတယ်။
ဒီပမာဏဟာ ဘဏ်တွေကပေးနေတဲ့ သီးနှံချေးငွေတွေနဲ့ သိပ်မတူလှဘူး။ ဘဏ်တွေက ပေးတဲ့ ချေးငွေက ပြန်ဆပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လယ်သမားတွေရဲ့ ငွေကြေးအခြေခိုင်မှုကို လျော့ပါးစေတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကတော့ ပြန်ဆပ်စရာမလိုတဲ့အတွက် လယ်သမားတွေကို ငွေကြေးအခြေ ခိုင်စေတယ်။ လယ်သမားတွေလက်ထဲ အိမ် အရောက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်က ထူထောင်ခဲ့ဒေ ဒေသဆိုင်ရာ ကျေး လက်ဘဏ်တွေဟာလည်း အခုအခါမှာတော့ အကျိုးအမြတ်ကို ရှေးရှုပြီးတော့ မြို့ပြကို ရွှေ့လာကြတော့ လယ် သမားတွေနဲ့ ကင်းကွာနေတယ်။
ဝယ်လိုအားဘက်က ကြည့်ရင်လည်း အစားအစာထုတ်လုပ်ရေးမှာ မလုံလောက်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် သွင်းအားစုဘက်မှာ အဟန့်အတားတွေက ဈေးကို မြင့်စေတယ်။ ဒီတော့ သံသရာလည်နေတဲ့ ဒီအဟန့်အတား တွေကို ချိုးဖောက်ဖို့အတွက် RBS စီမံကိန်းက ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားစေရေး လယ်ယာအရင်းအနှီး ကဏ္ဍထဲကို ငွေကြေး ထည့်သွင်းပေးတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရင် အစားအစာထုတ်လုပ်ရေး တက်လာနိုင်ပါ တယ်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဟာ ဈေးကွက်အခြေပြု လုံခြုံမှုပေးနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အပြောင်းအလဲ မြန်တာတွေကို လျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။
လူတွေကို အကူအညီပေးရေးဆိုင်တဲ့ စီမံကိန်းက အဝေဖန်တော့ မလွတ်ပါဘူး။ ဒီစံကိန်းဟာလည်း ကောင်း တယ်ဆိုပေမယ့် ဝေဖန်တာတော့ ခံရပါတယ်။ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီစီမံကိန်းဟာ လယ်သမား တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် ဝန်းကျင်ကောင်း ဖန်တီးပေးတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အစိုးရက ကာကွယ် လွန်းနေရင်လည်း စာရိတ္တဆိုင်ရာ ပျက်ယွင်းမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လွှတ်ပေးလိုက်ရင် ဆိုးကျိုးများ နိုင်တဲ့အတွက် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေထဲမှာ လယ်သမားတွေကို ထားရပါ တယ်။ နောက်ပြဿနာ တစ်ခုကတော့ ဘယ်လယ်သမားတွေကို စီမံကိန်းထဲ ပါစေမလဲဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာဆိုရင် တယ်လန်ဂါနာပြည်နယ်က လယ်သမားတွေရဲ့ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသော သူရင်းငှား လယ်သမားတွေကို ဒီစီမံ ကိန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။ သူရင်းငှား လယ်သမားတွေအပြင် ချမ်းသာတဲ့၊ ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့ လယ်သမားတွေကိုလည်း ဒီစီမံကိန်းထဲမှာ ထွည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ပြဿနာကတော့ လယ်သ မားတွေကို ဒီစီမံကိန်းထဲ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းပါ။ ချမ်းသာတဲ့ လယ်သမားတွေကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေကို ဖြုန်းတီးပစ်တာဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးစီမံကိန်းရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ပါ။
အနှစ်ချုပ်ပြီး ပြောရရင် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ လယ်သမားတွေအတွက် ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိတဲ့ ဝင်ငွေဖန်တီးပေးခြင်း၊ အကြွေးနွံတွင်း ကျဆင်းခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေ သုံးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်း လယ် သမားတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိမှု၊ အစားအသောက် ဖောင်း ပွမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေဟာ ရေတို၊ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပါပဲ။
နယူးဒလေီ၊ ဒီဇငျဘာ ၁၉
“ စိုကျပြိုးရေးမှာသာ တဈခုခု မှားယှငျးသှားရငျ ဒီနိုငျငံမှာ ဘာမှလုပျလို့ မရတော့ဘူး ’’
အမျ. အကျဈ. ဆှာမီနသနျ
အိန်ဒိယနိုငျငံက လယျသမားတှရေဲ့ ဒုက်ခသုက်ခတှကေ အထူးတလဲကို ပွောနစေရာ မလိုလောကျအောငျ ထငျ သာမွငျသာ ရှိနပွေီးသားပါ။ မကွာသေးခငျက လယျသမားတှေ ကွုံခဲ့ရတာတှကေ သကျသပေါပဲ။ တယျလနျ ဂါနာပွညျနယျ အစိုးရက လုပျနတေဲ့ လယျတဈဧကကို ရူပီး ၄,၀၀၀ နှဈနှဈတဈကွိမျ ထောကျပံ့တဲ့ Rythu Bandhu Scheme (RBS) ဆိုတဲ့ အစီအစဉျဟာ အမှောငျထုထဲက အလငျးစလေး တဈစပါ။ ဒီအစီအစဉျမှာ နိုငျ ငံရေးအကှကျတှေ ပါတယျဆိုပွီး ငွငျးခုနျနတောတှကေို ဖယျလိုရငျ ဒီအစီအစဉျရဲ့ အကြိုးကတော့ ဆှေးနှေး သငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုပါပဲ။
လူဦးရေ ၃၆ သနျးရှိတဲ့ တယျလနျဂါနာပွညျနယျမှာ လူဦးရဲ့ တဈဝကျကြျောက လယျယာလုပျငနျး၊ လယျယာနဲ့ ဆကျစပျတဲ့လုပျငနျးကို လုပျကိုငျနကွေတာပါ။ အဲဒီလယျသမားတှထေဲကမှာ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးကြျောက ဆငျးရဲတဲ့ လယျသမားတှပေါ။
သူတို့အားလုံးပေါငျး ပိုဆိုငျတဲ့ လယျယာမွဟော ပွညျနယျအတှငျးက လယျယာမွရေဲ့ ၃၄ ရာခိုငျနှုနျး (သုံးပုံ တဈပုံ)ပဲ ရှိပါတယျ။ အသေးစားလယျသမားတှေ ပိုငျဆိုငျတာကတော့ ၁၃ ရာခိုငျနှုနျး(ဆယျပုံတဈပုံကြျော) ပဲရှိ ပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီပွညျနယျက ခရိုငျအမြားစုက မိုးခေါငျကွတယျ။ လယျယာမွတှေရေဲ့ ၆၃ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ဟာ မိုးကောငျးတောတှပေါ။ စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု အားလုံးဟာ မိုးအပျေါ မှီခိုနကွေရတယျ။ စိုကျခငျး အမြားစုကို လကျယကျတှငျးတှေ၊ လကျတူးရတှေငျးထဲက ရတှေနေဲ့ ရပေေးဝတေယျ။ အဲဒီရတှေငျးတှဟောလညျး ခမျးတာ တို့၊ ရနေညျးလှနျးသှာတာတို့ ဖွဈတတျတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသတောတှေ၊ အကွှေးနှံနဈတာတှေ၊ မလုံလောကျတဲ့ ငှခြေေးပေးမှုတှကွေောငျ့ လယျသ မား အမွောကျအမွားဟာ ဆငျးရဲတှငျး နကျသထကျ နကျလာတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘဏ်ဍာရေး ဝနျဆောငျမှုမရတာ၊ မိုးမမှနျတာ၊ စိုကျပြိုးစရိတျ ပိုမြားလာတာ၊ အကွှေးနှံနဈတာတှဟော ပွညျနယျအတှငျးက လယျလုပျလကျစား တောငျသူတှေ၊ ငှကွေေးမပွလေညျတဲ့ တောငျသူတှကေို ဗူးလေးရာ ဖရုံဆငျ့ဆိုသလို ပိုအခကျကွုံစတေယျ။ ဒါဟာ အိန်ဒိယ တဈနိုငျငံလုံးက လယျသမားတှေ ကွုံနရေတဲ့ ဒုက်ခသုက်ခတှပေဲ။
ငှကွေေး အရငျးအနှီးအဖွဈ လယျယာပိုငျဆိုငျမှုပွနိုငျတဲ့ လယျသမားတှကေို စိုကျပြိုးရာသီအစမှာ တဈ ဧက ရူပီး ၄,၀၀၀ (ကပျြ ကိုးသောငျးနီးပါး)ကို နှဈနှဈ တဈကွိမျ အစိုးရက ထောကျပံ့တယျ။ လယျသမား ခွောကျ သနျးနီးပါး ဒီစီမံကိနျးရဲ့ အကြိုးကို ခံစားခှငျ့ရမယျလို့ မှနျးထားကွတယျ။
ဒီစီမံကိနျးကို လူတျောတျောမြားမြား ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ကွိုဆိုကွတယျ။ တခြို့ကတော့ နိုငျငံရေးတှေ ပါတယျ ဆိုပွီး မကွိုကျတာမြိုးတော့ ရှိတယျ။ အစိုးရဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ်ဍာနှဈမှာ ရူပီး ၁ဒသမ၂ ဘီလီယံ ခထြားပေး ထားတယျ။ လိမျလညျထုတျယူတာတှေ ရှိမှာစိုးတဲ့အတှကျ အစိုးရက လယျသမားတှကေို ခကျြလကျမှတျတှပေဲ ထုတျပေးပါတယျ။
ဒီစီမံကိနျးကွောငျ့ပဲ တောငျအာဖရိက နိုငျငံတှမှော လုပျနတေဲ့ မြိုးစကေ့ဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စီမံကိနျးက South-South Cooperationနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ တယျလနျဂါနာ ပွညျနယျအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ်ဂ စားနပျ ရိက်ခာအဖှဲ့တို့ မကွာသေးခငျက ဆှေးနှေးခဲ့ကွသေးတယျ။ ဒါဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့မှာ ဒီစီမံကိနျးရဲ့ အရေးပါပုံကို ပွနတောပါ
အခုလုပျနတေဲ့ အဲဒီတိုကျရိုကျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု စီမံကိနျးဟာ အလှညျ့အပွောငျးမြားတဲ့ စိုကျပြိုးရေးစြေးကှကျ ကွောငျ့ လယျသမားတှေ ဒုက်ခမရောကျအောငျ အကူအညီပေးတဲ့ ဝငျငှအေစီအမံပါ။ တခွားလုပျနတေဲ့ တိုကျ ရိုကျထောကျပံ့မှု အစီအစဉျတှနေဲ့ မတူတာက ဒီစီမံကိနျးက အကောငျအထညျဖျောရ လှယျကူတယျ။
ကမ်ဘာမှာတော့ တရုတျကလညျး ဒီစီမံကိနျးလို အလားတူစီမံကိနျးတှကေို ဘကျစုံအကူအညီပေးရေး စီမံကိနျး ဆိုတဲ့ အမညျနဲ့ လုပျနတောရှိတယျ။
အဲဒီစီမံကိနျးက လယျသမားတှအေတှကျ စိုကျပြိုးရေးဆိုငျရာ အထောကျအပံ့ကို ဧကအလိုကျ ပေးတယျ။ စိုကျ ပြိုးရာမှာ ထညျ့သှငျးရတဲ့ သှငျးအားစုအခွပွေု အရံအထောကျအပံ့ စီမံကိနျးတှအေားလုံးကို ပေါငျးလိုကျပွီး ဟကျတာအလိုကျ ငှအေလုံးအခဲလိုကျ ပေးတာဟာ တရုတျစိုးရက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ တိုကျရိုကျအရငျးအနှီး အကူ အညီပေးတဲ့ စီမံကိနျးဘကျ ပွောငျးလာနတောကို ပွနပေါတယျ။ ပိုပွီး အရေးကွီးတာက အိန်ဒိယမှာ အကောငျ အထညျဖျောနတေဲ့ RBS စီမံကိနျးက အကောငျအထညျဖျောရ လှယျကူတယျ။ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိတယျ။ ငှရေ လှယျတယျ။ သီးနှံအလိုကျ ခှဲခွားတာမရှိဘူး။ စိုကျပြိုးရေးစြေးကှကျ စနဈကို မပကျြစဘေူး။ ကွားခံတှေ သိပျ မရှိဘူး။
RBS ရဲ့ အကြိုး
ငှကွေေးရရှိမှု အခွအေနအေရကွညျ့ရငျ ဒီစီမံကိနျးဟာ စိုကျပြိုးထုတျလုပျရေးအတှကျ လကျသမားတှေ လကျ ထဲကို ငှသေားထညျ့ပေးတယျ။ ဒါဟာ ဆငျးရဲတဲ့ လယျသမားတှကေို မိမိရဲ့ ငှကွေေးပိုငျဆိုငျမှု တိုးလာနိုငျ အောငျ အကူအညီပေးတယျ။ အစားအသောကျထုတျလုပျရေးမှာ ပါဝငျနိုငျအောငျ အကူအညီပေးတယျ။
ဒီပမာဏဟာ ဘဏျတှကေပေးနတေဲ့ သီးနှံခြေးငှတှေနေဲ့ သိပျမတူလှဘူး။ ဘဏျတှကေ ပေးတဲ့ ခြေးငှကေ ပွနျဆပျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လယျသမားတှရေဲ့ ငှကွေေးအခွခေိုငျမှုကို လြော့ပါးစတေယျ။ ဒီစီမံကိနျးကတော့ ပွနျဆပျစရာမလိုတဲ့အတှကျ လယျသမားတှကေို ငှကွေေးအခွေ ခိုငျစတေယျ။ လယျသမားတှလေကျထဲ အိမျ အရောကျ ငှကွေေးဝနျဆောငျမှု ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ၁၉၇၆ ခုနှဈက ထူထောငျခဲ့ဒေ ဒသေဆိုငျရာ ကြေး လကျဘဏျတှဟောလညျး အခုအခါမှာတော့ အကြိုးအမွတျကို ရှေးရှုပွီးတော့ မွို့ပွကို ရှလေ့ာကွတော့ လယျ သမားတှနေဲ့ ကငျးကှာနတေယျ။
ဝယျလိုအားဘကျက ကွညျ့ရငျလညျး အစားအစာထုတျလုပျရေးမှာ မလုံလောကျမှုတှေ ရှိနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ သှငျးအားစုဘကျမှာ အဟနျ့အတားတှကေ စြေးကို မွငျ့စတေယျ။ ဒီတော့ သံသရာလညျနတေဲ့ ဒီအဟနျ့အတား တှကေို ခြိုးဖောကျဖို့အတှကျ RBS စီမံကိနျးက ထုတျလုပျမှု မွငျ့မားစရေေး လယျယာအရငျးအနှီး ကဏ်ဍထဲကို ငှကွေေး ထညျ့သှငျးပေးတယျ။
ဒီစီမံကိနျးကို အိန်ဒိယတဈနိုငျငံလုံးမှာ အကောငျအထညျဖျောနိုငျရငျ အစားအစာထုတျလုပျရေး တကျလာနိုငျပါ တယျ။ စိုကျပြိုးရေးမှာ ငှကွေေးထောကျပံ့ခွငျးဟာ စြေးကှကျအခွပွေု လုံခွုံမှုပေးနိုငျတယျလို့ ကမ်ဘာ့ဘဏျက ဆိုတယျ။ ပွီးတော့ စိုကျပြိုးရေးစြေးကှကျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ အပွောငျးအလဲ မွနျတာတှကေို လြှော့ခပြေးပါလိမျ့မယျ။
လူတှကေို အကူအညီပေးရေးဆိုငျတဲ့ စီမံကိနျးက အဝဖေနျတော့ မလှတျပါဘူး။ ဒီစံကိနျးဟာလညျး ကောငျး တယျဆိုပမေယျ့ ဝဖေနျတာတော့ ခံရပါတယျ။ စီးပှားရေး ပညာရှငျတှကေတော့ ဒီစီမံကိနျးဟာ လယျသမား တှကေို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစမေယျ့ ဝနျးကငျြကောငျး ဖနျတီးပေးတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ အစိုးရက ကာကှယျ လှနျးနရေငျလညျး စာရိတ်တဆိုငျရာ ပကျြယှငျးမှုတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
လှတျပေးလိုကျရငျ ဆိုးကြိုးမြား နိုငျတဲ့အတှကျ ထိနျးခြုပျထားတဲ့အခွအေနထေဲမှာ လယျသမားတှကေို ထားရပါ တယျ။ နောကျပွဿနာ တဈခုကတော့ ဘယျလယျသမားတှကေို စီမံကိနျးထဲ ပါစမေလဲဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာဆိုရငျ တယျလနျဂါနာပွညျနယျက လယျသမားတှရေဲ့ လေးဆယျရာခိုငျနှုနျးသော သူရငျးငှား လယျသမားတှကေို ဒီစီမံ ကိနျးထဲမှာ ထညျ့သှငျးထားခွငျး မရှိပါဘူး။ သူရငျးငှား လယျသမားတှအေပွငျ ခမျြးသာတဲ့၊ ဥစ်စာပစ်စညျးပွညျ့စုံတဲ့ လယျသမားတှကေိုလညျး ဒီစီမံကိနျးထဲမှာ ထှညျ့သှငျးထားခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ပွဿနာကတော့ လယျသ မားတှကေို ဒီစီမံကိနျးထဲ ထညျ့သှငျးခွငျး၊ ဖယျထုတျထားခွငျးပါ။ ခမျြးသာတဲ့ လယျသမားတှကေို ငှကွေေး ထောကျပံ့ပေးပွီး တိုငျးပွညျဘဏ်ဍာငှကေို ဖွုနျးတီးပဈတာဟာ ဆငျးရဲမှဲတမှေု လြှော့ခရြေးစီမံကိနျးရဲ့ ရညျရှယျ ခကျြပါ။
အနှဈခြုပျပွီး ပွောရရငျ စိုကျပြိုးရေး ထုတျလုပျမှု မွှငျ့တငျခွငျး၊ လယျသမားတှအေတှကျ ရရှေညျတညျတံ့မှုရှိတဲ့ ဝငျငှဖေနျတီးပေးခွငျး၊ အကွှေးနှံတှငျး ကဆြငျးခွငျး၊ နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာတှေ သုံးခွငျး၊ ဝငျငှနေညျး လယျ သမားတှကေို တိုးတကျအောငျ လုပျခွငျး၊ စိုကျပြိုးရေးစြေးကှကျ စဉျဆကျမပွတျ ရရှိမှု၊ အစားအသောကျ ဖောငျး ပှမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အပွောငျးအလဲတှဟော ရတေို၊ ရရှေညျ တညျတံ့တဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှပေါပဲ။
I would like to get across my gratitude for your kindness giving support to persons who have the need for help with this particular theme. Your special dedication to passing the solution all over has been pretty good and has surely helped workers just like me to arrive at their aims. Your valuable key points indicates muchaperson like me and even more to my colleagues. Warm regards; from everyone of us. golden goose
by grosmc@gmail.com at June 09 2019
Thanks for all your efforts on this website. Kim takes pleasure in carrying out research and it's simple to grasp why. Most of us notice all relating to the compelling form you provide both useful and interesting solutions by means of your blog and in addition welcome participation from some other people on this content while our daughter is understanding so much. Enjoy the rest of the new year. You're conductingaglorious job. coach outlet
by yogdqgj@gmail.com at June 05 2019
Thanksalot for providing individuals withavery breathtaking possiblity to read from here. It's always so sweet and packed withalot of fun for me and my office mates to search your blog on the least thrice every week to find out the newest issues you will have. And indeed, we're always pleased for the sensational points you give. Selected 1 tips on this page are rather the most impressive we have all ever had. caterpillar boots
by ycvqyrcqa@gmail.com at June 01 2019
My wife and i felt quite satisfied that Albert managed to carry out his reports from the ideas he came across from your very own weblog. It is now and again perplexing just to always be handing out methods which usually people today may have been selling. We fully understand we've got the blog owner to thank for this. All the illustrations you made, the simple website menu, the relationships you will give support to promote - it is most fantastic, and it's really leading our son and the family recognize that this subject is awesome, and that is wonderfully indispensable. Many thanks for everything! baseball jerseys
by gdmqqmgvku@gmail.com at May 28 2019
I wanted to sendasimple remark so as to appreciate you for some of the precious recommendations you are giving out here. My time intensive internet lookup has finally been recognized with beneficial facts and strategies to talk about with my company. I would suppose that many of us site visitors actually are very much fortunate to be inafabulous place with so many outstanding people with helpful techniques. I feel quite grateful to have come across your entire web pages and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thank you once more foralot of things. off white jordan 1
by aiyihnf@gmail.com at May 24 2019
I simply needed to thank you very much all over again. I am not sure the things that I would've followed without these ways discussed by you concerning my theme. It wasafearsome problem in my position, nevertheless viewing the very expert mode you dealt with that made me to jump for joy. I will be happier for your service and pray you find out what an amazing job you have been putting in training many people with the aid of your blog. I am sure you've never encountered all of us. jordan 11
by wzuokecm@gmail.com at May 20 2019
Thank you so much for giving everyone an extremely terrific opportunity to check tips from this blog. It is often so lovely and also packed with fun for me and my office colleagues to search your site no less than three times in one week to find out the new tips you have. Of course, I am actually pleased with all the superb methods you give. Selected two tips in this post are really the very best we have all ever had. air yeezy [url=http://mail.ir.gl/f8c701]air yeezy[/url]
by jkuwpme@gmail.com at May 19 2019
I simply wanted to write downasmall note in order to say thanks to you for all of the stunning pointers you are showing on this site. My extensive internet search has finally been recognized with wonderful facts and techniques to talk about with my friends. I would express that many of us readers are extremely blessed to live inauseful site with many perfect professionals with useful techniques. I feel extremely happy to have encountered your entire web site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks once again foralot of things.
by http://www.goldengooseoutlet.us at May 16 2019
My wife and i got so thankful Jordan managed to conclude his basic research from your precious recommendations he received through your web page. It's not at all simplistic to just continually be handing out strategies which some others have been making money from. We consider we've got the writer to give thanks to for this. Those explanations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you can help create - it is everything amazing, and it's really letting our son and the family recognize that this concept is pleasurable, which is certainly truly essential. Thanks for the whole lot!
by http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com at May 11 2019
Thank you for your whole efforts on this website. My mum really likes working on investigation and it's really easy to see why. Many of us learn all of the compelling means you deliver important ideas via your blog and as well cause response from website visitors on this theme plus our favorite simple princess is now being taught so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You're conductingaremarkable job.
by http://www.yeezyboost-350.uk at May 07 2019